विश्व Archives - Page2of3- सुदुर नेपाल
श्वास गन्हाउने समस्या छ भने ? यस्ता छन् जोगिने उपाय
हामी सामान्य टाउको दुखाइलाई पनि महत्व दिन्छौँ । अलिकति कतै छाला नै खोस्रियो भने पनि उपचारको चिन्ता गर्छौ । तर, जीवनको सबैभन्दा भहत्वपूर्ण अंग मुख र दाँतको स्वास्थ्यमा भने त्यति धेरै ध्यान दिने गरेका हुँदैनौँ । मुख र दाँतको स्वास्थ्य निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीले दाँत र मुख स्वास्थ्यको ख्याल गरेनौँ भने समयभन्दा अघि नै दाँत रोगी हुने र श्वास गन्हाउनेजस्ता समस्या सुरु हुन्छ । यतिमात्र होइन मुख र दाँत
एजेन्सी|उत्तरी चीनमा गाडिएको तीन दिन पछि एक महिलाको जीवितै उ’द्धार गरिएको छ । प्यारालाइसिस पी’डित आफ्नै आमालाई छोराले जिउँदै गा’डेका थिए ।समाचार एजेन्सी एपीको रिपोर्ट अनुसार आ’रोपीले आफ्नी आमालाई जिउँदै चि’हानमा गाडेका थिए । यद्यपि ती महिलालाई पछि नराम्ररी डराएको अवस्थामा जी’वित उद्धार गरिएको जनाइएको छ । प्र*हरीले आमालाई गा’ड्ने छोरालाई नियन्त्रणमा लिएर उनीवि’रुद्ध ह’त्या प्रयासको मुद्दा दर्ता गरेको छ ।आरोपीकी पत्नीका अनुसार उनका पतिले २ मेका दिन आमालाई ह्वीलचेयरमा
दुनियामा मानिसहरु आ आफ्नै साथी भाई र ईष्ट मीत्र हुन्छ । कोही मानिसहरु अन्य मानिससंग छिट्टै घुलमेल हुन्छन् । भने कोहि कम हुन्छन् । शास्त्र अनुसार कोहि मानिसहरको आ आफ्नै ग्रह र नक्षत्र हुन्छन् । त्यसैले ति ग्रह नक्षत्रले मानिसको कुण्डलीमा प्रभाव पर्छ । जसले मानिसहरुको जिवनमा समेत प्रभाव पारेको हुन्छ । यस्तै नक्षत्रको आधारमा नै हरेक मानिसको राशि फरक फरक हुने गर्छ । फरक फरक राशिकै आधारमा मानिसहरुको स्वाभाव
भर्खरै सीमा वि’वादपछि भारतीय से’नाको हवाइ गस्ती (भिडियो सहित)
नेपालमा अतिक्र*मित भूमि कालापानी-लिपुलेकको मुद्दा चर्किँदा भारतले त्यस क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बढाएको छ। अहिले भारतीय सेनाका हेलिकोप्टर नेपाली आकाशमा उडिरहेका छन्। नेपाली भूमि कालापानी कब्जा गरेर सैन्य क्याम्प खडा गरेको भारतले सैनिक हेलिकप्टरबाट त्यहाँ ओहोरदोहोर बढाएको छ। सोमबारमात्रै चारपटक भारतीय सेनाको हेलिकोप्टरले ओहोरदोहोर गरेको दार्चुलाका पत्रकार भोजराज जोशीले बताए।भारतीय सेनाको हेलिकोप्टर खेपका खेप उडिरहेका छन्। कालापानीमा समान पुर्‍याउन होला, सदरमुकाम खलंगाबाट फोन सम्पर्कमा आएका उनले अनुमान गरे, सडक उद्घाटन भएपछि
महिलाहरुले शारीरिक कस्ता पुरुष राेज्छन् ?
महिला र पुरुषकाे शारीरिक सम्पर्क फरक फरक हुने गर्दछ त्यस्तै उनिहरुकाे पर्टनरकाे राेजाइ पनि अलग हुने गर्दछ । नयाँ अध्ययनका अनुसार महिलाहरु अनुभवी पुरुषहरु आफ्नो बेडमा चाहन्छन् भने पुरुषहरु आफ्नी महिलालाई शारीरिक सम्पर्क बारेमा कुनै पनि अनुभव नभएको रोज्ने गर्दछन् । एमएसएनको एक नयाँ शोधका अनुसार १० पुरुषमध्ये एकजनाले आफ्नो जीवनसंगीनी पाउनुभन्दा अघि ११ जना महिलाहरुसँग शारीरिक सम्पर्क क्रियाकलाप गर्न चाहन्छन् भने मात्र पाँच प्रतिशत महिलाहरुले आफ्नो लाइफपार्टनर पाउनुभन्दा अघि
बधाई: दिवश पोखरेल अमेरिकन आइडलको टप १० मा
काठमाडौ : यतिबेला सिंगाे विश्व नै काेराेना भाइरसकाे कहरमा अल्झिरहेकाे छ । सबैतिर डर, निरासा र बेखुसि छाइरहेकाे छ । यसैबिचमा संसारभर छरिएर रहेका नेपालीमाझ खुसि दिलाउने काम गरेका छन नेपाल दिवस पाेखरेलले । ‘अमेरिकन आइडल’को १८ औं संस्करणमा सहभागी नेपाली युवा दिवेश पोखरेल उत्कृष्ट १० मा पुग्न सफल भएका छन्। अर्थर गन भनेर पनि चिनिने दिवस पाेखरेल विश्वकै ठूलो मानिएको गायन रियालिटी शो अमेरिकन आइडलमा विभिन्न चारणहरु पार गर्दै
मनकामनाका दर्शन गरि जान्नुहाेस् तपाईंको आज……
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – आत्मबल र उत्साहमा बृद्धि हुने दिन छ । उचित समयमा गरिएको निर्णयले उम्किन लागेको काम बन्नेछ । आफन्तजनसँग आत्मीयता बढ्ने छ । तर्क, वि*वाद र बहसमा विजयी भइने छ । आशा गरेअनुरूप सहयोगी जुट्ने छ । गरेको प्रयासमा सफलता मिल्ने देखिन्छ । शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई पालना गर्दा खुसी र उमङ्गको वातावरण बन्नेछ । सुखद समाचारले अझ उत्साह बढ्नेछ । व्यापार–व्यवसायमा
यसरी ल्याउने फेसबुकमा’केयर रियाक्सन’
एजेन्सी – सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले केही दिनयता “केयर” नाम दिएर नयाँ रियाक्सन ल्याएको छ । विश्व नै लकडाउनको विषम परिस्थितिमा रहेको बेला केही नयाँ अनुभव दिने उद्देश्यले यो रियाक्सन अपडेट गरेको फेसबुकले बताएको छ । फेसबुकले फेसबुक पोस्ट तथा म्यासेन्जरको म्यासेजमा समेत यो रियाक्सन प्रयोग गर्न मिलने बताएको छ । प्रायः धेरै मानिसको फेसबुक अकाउन्टमा केयर रियाक्सन अपडेट भएता पनि केहीको अकाउन्टमा अझै हुन बाँकी छ । अर्थात् कसैले यो
हरि कृष्ण न्यौपाने- कुवेतले कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि आज मार्च २२ तारिक आईतबार,२०२० का दिन बेलुका ५:०० बजे बाट अर्को दिन बिहान ४:०० बजे सम्म दैनिक ११ घन्टा कर्फ्यू लगाउने भएको छ।साथै कर्फ्यू उल्लंघन गरेमा ३ बर्ष जेल र १० हजार कुवेती दिनार जरिवाना गरिने जनाइएको छ। कुवेतबाट प्रकाशित कुवेत टाइम्सले समाचारमा लेखेको छ” २२ मार्च आइतबार बेलुकी ५ बजे देखि अर्को दिन बिहान ४ बजे सम्म कर्फ्यू लगाइने छ।”
श्रीलङ्काको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले शनिबारदेखि तीन देशका यात्रुलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार दक्षिण कोरिया, इरान र इटालीबाट आउने यात्रुलाई श्रीलङ्का आउन प्रतिबन्ध लगाइएको हो । कोरोना भाइरसको सङ्क्रम बढ्दै जान थालेपछि अनिश्चितकालका लागि ती देशका यात्रुलाई प्रतिबन्ध लगाएको अधिकारीको भनाइ छ । प्राधिकरणको आग्रहअनुसार सूचना विभागले सबै विमान कम्पनीहरुलाई ती देशबाट श्रीलङ्कामा यात्रु नल्याउन आग्रहसहित सूचित गरेको छ । हालै ती देशको भ्रमण गरेका यात्रुहरुलाई पनि नल्याउनसमेत श्रीलङ्काले